Kuboshwe amaphoyisa ngokweqa kwesiboshwa | News24
Kuboshwe amaphoyisa ngokweqa kwesiboshwa
Port Elizabeth – Kuboshwe amaphoyisa amabili ngezinsolo zokusiza owesifazane owayeboshelwe ukubulala eqe ezikhindini ngokusho kombiko.
Okhulumela amaphoyisa aseMotherwell uCaptain Andre Beegte uthe amaphoyisa, elinye elingu-warrant ngesikhundla elineminyaka engu-53 ubudala nelinye elinguSayitsheni elinengu-58 ubudala, akhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngemuva kokuba umsolwa wesifazane oneminyaka engu-28 ubudala uLungiswa Tsengiswe enyamalele ezikhindini zesiteshi samaphoyisa saKwazakele ngoLwesine.
UBeegte uthe kubonakale ngoLwesine ukuthi uTsengisiswe akasekho lapho abevalelwe khona.
OLUNYE UDABA: Kudutshulwe kwabulawa usomatekisi eMarianhill
“Ibamba lomphathi wesiteshi ubheke umabonakude wangaphakathi esiteshi kwabonakala ukuthi lona wesifazane weqe ngosizo lwala maphoyisa,” esho.
UBeegte uthe kuqale uphenyo lwangaphakathi njengoba la maphoyisa ethweswe amacala enkohlakalo, ukusiza ngokweqisa isiboshwa nokwephula umthetho.
Kulindeleke ukuthi la maphoyisa avele enkantolo ngoMsombuluko mhlaka 1 kuJuni 2015.
UBeegte unxuse noma ngubani onolwazi ngoTsengisiwe ukuba axhumane namaphoyisa asesiteshini saKwazakele.